पिडित श्रीमतीको गुनासो : मेरा श्रीमानले हामी बिचको कुरा सबै साथीहरुसंग शेयर गर्नुहुन्छ - Khabar Nepali
प्रश्नः मैले मेरो प्रेमीसंग बिवाह गरे । हामी हनिमुनमा नगएसम्म सबै कुरा ठीक थियो। हाम्रो यात्राको पहिलो दिनमा, मलाई थाहा भयो कि मेरो श्रीमानले हाम्रो यौ’ ‘न जीवन आफ्ना साथीहरूसँग बताउने गर्छन्। उनका धेरै साथी सर्कल पनि छन् र त्यहाँ उसले आफ्नो यौ’ ‘न जीवनको बारेमा घमण्ड गर्छ। उसले हरेक मिनेटको विवरण सबैसँग बताउने गर्दछ र म यस अवस्थासँग सहज छैन। यो बाल्यकर्म होइन र ? मैले श्रीमान्सँग पनि यस विषयमा कुरा गर्ने प्रयास गरेँ तर उनले मलाई गा’ ‘ली गर्दै केहि हुन्न भने ।
चाहे त्यो सबै केटाहरूको व्हाट्सएप समूह हो वा महिला साथीहरू, उनी अझै पनि आफ्नो व्यक्तिगत कुराको बारेमा कुरा गर्छन्। म अहिले उसको बानी देखेर धेरै रि’साएको छु र बारम्बार बोल्दा पनि उसले आफ्नो बानी बदलेको छैन । के यो समस्याको समाधान छ?
काउन्सिलिङ मनोवैज्ञानिक रचना अवतारमणिलाई जवाफ दिनुहोस्: विवाह एउटा अनुभव हो जसमा दुई व्यक्ति आफ्नो बाँकी जीवनको लागि समान साझेदारको रूपमा सँगै बस्छन्। सामान्यतया यस स’म्बन्धको शुरुवातमा, जोडी खुशी र उत्साहित महसुस गर्दछ। उनीहरु आफ्नो स’म्बन्धमा जे छ त्यो धेरै राम्रो छ भन्ने विश्वास गर्छन्, यसै कारण उनीहरु बीचको भिन्नतालाई पनि ध्यान दिदैनन् ।
तर, समय बित्दै जाँदा उनीहरूले एकअर्कालाई अझ बढी बुझ्न थाल्छन् र त्यसपछि उनीहरूलाई पार्टनरको व्यवहार, बानी र व्यक्तित्वको वास्तविकता थाहा हुन्छ। यी मध्ये एउटा कुरा आफ्नो परिवार र साथीभाइसँगको पार्टनरको ब’न्धन पनि हो, जुन विवाहको केही दिनपछि मात्रै बुझ्न सकिन्छ ।
म बुझ्छु कि तपाईको श्रीमानले व्यक्तिगत र यौ’ ‘न जीवनको जानकारी साथीहरूलाई खुलासा गर्ने तरीकाले उसले तपाईलाई असहज बनाइरहेको छ। उनीहरुसँग कुरा गर्दा पनि निष्कर्ष निस्किएको छैन । यस्तो अवस्थामा, म सुझाव दिन्छु कि तपाईले सीधै सोध्नुहोस् कि उनीहरु तपाई र यो स’म्बन्ध’बाट के चाहन्छन्। तिनीहरूलाई पछि आफ्नो अपेक्षाहरू बारे बताउन भन्नुहोस ।
यसमा सँगै काम गर्नुहोस् र केही आधारभूत नियमहरू बनाउनुहोस्। हामी कसैलाई उसको व्यवहारको आधारमा सबै भन्न सक्दैनौं, किनकि उनीहरूले आफ्ना साथीहरूसँग त्यस्तो जानकारी दिनु शेयर सामान्य हुन सक्छ।
विवाहित जीवनमा सं’ल’ग्न दुई व्यक्ति फरक पृष्ठभूमिबाट आएका र फरक ढंगले हुर्केका हुन् भन्ने कुरा हरेक व्यक्तिले बुझ्नुपर्छ । यस कारण, तपाईं दुवैले कुराकानी गरेर समाधानको उपाए खोज्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले यो पनि उल्लेख गर्नुभयो कि उहाँले तपाईंलाई गा ली गर्नुभयो र तपाईंलाई आफ्नो जीवनमा ह’स्तक्षे’प नगर्न आग्रह गर्नुभयो।
तपाईंले तिनीहरूलाई भन्नु पर्छ कि यो तपाईंको दुवै जीवनसँग सम्बन्धित छ र तपाईं दुवै यसको लागि समान रूपमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। त्यसैले मिलेर काम गर्नुपर्छ । त्यहाँ केहि चीजहरू हुन सक्छ जुन उसले तपाईबाट र तपाईले उहाँबाट चाहनुहुन्छ। यी प्रारम्भिक समायोजन समस्याहरू हुन्। अहिले मिलेर काम गर्‍यौं भने यी समस्या पनि हट्नेछन् ।